1SET / Brown
8 အဆင့်ဆင့်ကို manual ညှိနှိုင်းမှု; မော်တာအားဖြင့် 24 အဆင့်ဆင့်
ရရှိနိုင် Fixed သို့မဟုတ်ဒေါင်လိုက်ညှိနှိုင်းမှု
လေ့ကျင့်ခန်းစက်ဘီးသည်အိမ်၌ရှိသည်နှင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း၊ တန်ခြင်းနှင့်အားဖြည့်ခြင်းကဲ့သို့သောကျန်းမာရေးနှင့်ကြံ့ခိုင်မှုဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများကိုပေးသည့်လူကြိုက်အများဆုံး cardio စက်များအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ …
Bestgym သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်တိုင်းအတွက်သင်လိုအပ်သော ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ပံ့ပိုးမှုများပေးပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်ယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သောစီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များဖြစ်သည်။ သငျသညျအပန်းဖြေခြင်းနှင့်စီးပွားရေးလုပ်နေတာနှင့်အတူအပေါ်ရနိုင်သည်။
မည်သည့်ပြproblemနာအတွက်မဆိုသင့်အဆင်ပြေသည့်အချိန်တွင် ကျေးဇူးပြု၍ ကျွန်ုပ်တို့အားဆက်သွယ်ပါ။ ၂၄ နာရီအတွင်းကျွန်ုပ်တို့ ဦး စားပေးမှုကိုသင့်အားအကြောင်းကြားပါမည်
စက်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ7နှစ်ကျော်။
ကုန်ပစ္စည်းများတင်ပို့ခြင်း - တစ်ကမ္ဘာလုံးရှိနိုင်ငံပေါင်း ၁၅ နိုင်ငံ။
လက်လီအိမ်သုံးအိမ်သုံးအသုံးပြုမှု 8 Levels Resistance A ...
မူလစာမျက်နှာအသုံးပြုမှုသံလိုက်ဖြောင့်စက်ဘီးစီးမိုးလုံလေလုံအားကစားရုံ Resis ...
၂၀၂၀ ဒီဇိုင်းသစ် Premium Quality Gym Air Bike / ...
Hot sale မိုးလုံလေလုံပြောင်းလဲနေသောခေါက်နိုင်သောဘက်ပေါင်းစုံ ...
Cushion ချိန်ညှိသံလိုက်လေ့ကျင့်ခန်းဖြောင့်မတ် bi ...